The Ab Presents Nepal » बोडिङ स्कुलमा ‘छड्के’ बिना रसिद २५० को सर्टिफिकेट लाई ८ हजार ? यस्ता छन बहाना, सरकारी स्कुलमा लफडा (भिडियो)
बोडिङ स्कुलमा ‘छड्के’ बिना रसिद २५० को सर्टिफिकेट लाई ८ हजार ? यस्ता छन बहाना, सरकारी स्कुलमा लफडा (भिडियो)
पोखरा बाट गण्डकी टेलिभिजन मार्फत हरेक हप्ताको शुक्रबार आउने एक बिशेष कार्यक्रम हो गण्डकी छड्के । गण्डकी छड्के कार्यक्रमले पोखरा र पोखरा आसपासका क्षेत्रहरुमा भइरहेका सामाजिक, सरकारी अनियमितताको विषयमा खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । गण्डकी छड्के टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु भएसँगै जनस्तरबाट सकारात्मक साथ समर्थन पनि पाइरहेको छ । यस कार्यक्रमका प्रस्तोता तथा पत्रकार अपिल त्रिपाठी अहिले निकैनै चर्चामा आइ रहेका देखिन्छन । उहाको प्रस्तुती र प्रतक्ष्य घटनास्थगल रिपोर्ट प्रोग्रामले नेपाली हरुको मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ’।
देशमा रबि लामिछाने लगायत अपिल त्रिपाठी जस्ता एक असल पत्रकार हरुको जन्म हुनु सारा नेपाली हरुको को लागी रौरवको बिषय हो । संस्थागत भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगि, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगिका घटनालाई पर्दाफास गरेर पत्रकार लामिछाने लगायत अपिल त्रिपाठी अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । यसै क्रममा बोडिङ्ग स्कुलले अभिभावकहरुलाई ठगेको प्रणाम भेटेपछि अपिलले स्कुलमै पुगेर ठगीको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छन् । भिडियो :
यो पनि पढ्नुहोस : कास्कीका सबै वडामा पार्टी कमिटी गठन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कास्कीका ७२ वडामा पार्टी कमिटी गठन गरेको छ । महानगरको ३३ र चार गाउँपालिकाका ३९ वडामा एकता प्रक्रिया सकिएपछि शपथ कार्य शुरु गरिएको केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इञ्चार्ज राजकाजी गुरुङले बताउनुभयो । महानगरका वडामा शपथ गराउने कार्यक्रम केहीमा सकिएको र दुई÷तीन दिनभित्रमा ३३ वटैमा सकिएर गाउँपालिकामा शपथ शुरु गरिने जनाइएको छ । पार्टीको १० सदस्यीय जिल्ला कार्यालय सदस्यको टिमले वडा विभाजन गरेर शपथ गराएको हो । गत असारमा वडाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको दुई महीनापछि कमिटीमा रहने सदस्य चयन गरिएको हो ‘।
नेकपाले ४५ सदस्यीय महानगर वडा कमिटीमा पूर्व एमालेबाट २६ र माओवादी केन्द्रबाट १९ तथा गाउँपालिकाको २९ सदस्यीय कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १७ र माओवादीबाट १२ रहने गरी गठन गरेको छ । वडामा कमिटी चयन भएपनि महानगरसहित चार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र सचिव भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन ‘।
महानगर कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रको सचिवालयले टुङ्गो लगाउने भएकाले नेतृत्व चयन हुन बाँकी रहेको जिल्ला इञ्चार्ज गुरुङले बताउनुभयो । वडाका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज भने प्रदेश कमिटीले तोक्ने बताइन्छ । महानगर कमिटीको नेतृत्व पाउनेले एउटा गाउँपालिका लिनुपर्ने पूर्व माओवादीले बताउँदै आएको छ भने पूर्व एमालेले महानगर जसको भागमा परेपनि गाउँपालिका दुई÷दुई गरिनुपर्ने माग गरेको छ’ ।
नेकपाले वडा कमिटी चयनसँगै आगामी मङ्सिर १४ गते क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारी शुरु गर्ने भएको छ । सरकारले गरेका कामको जनस्तरमा लैजाँदै उपनिर्वाचनमा होमिने बताउँदै इञ्चार्ज गुरुङले भन्नुभयो, “पार्टीको तल्ला कमिटी गठनसँगै उपनिर्वाचनमा होमिन्छौँ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका तीनै तहका सरकारका काम जनतामाझ लगेर मत माग्छौँ’ ।